“Sharaf Ayaanu La Hoyanaya, laakiin Waanu Murugaysanahay” – Santiago Solari Oo Ka Falceliyey Guul-darradii Real Madrid Kala Kulantay Barcelona – Cadalool.com
“Sharaf Ayaanu La Hoyanaya, laakiin Waanu Murugaysanahay” – Santiago Solari Oo Ka Falceliyey Guul-darradii Real Madrid Kala Kulantay Barcelona
Tababaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid, Santiago Solari ayaa ka hadlay guul-darradii ay Barcelona xalay ugu xambaarisay garoonka Santiago Bernabeu, isla markaana kaga saartay tartanka Copa del Rey.
Barcelona ayaa iska xaadirisay finalka oo ay ku qaabili doonto Valencia iyo Real Betis oo caawa ballansan midkooda soo baxa, waxaana taas ka caawiyey Luis Suarez oo laba gool u dhaliyey iyo mid uu difaaca Real Madrid iska dhaliyey, ugu dambayna natiijada ciyaarta ee celceliska labadii is arag ka dhigaysa 4-1 ay Barcelona ku adkaatay.
Inkasta oo khasaare soo gaadhay, haddana tababaraha Real Madrid, Santiago Solari ayaa ku dooday in kooxdiisu ay si wanaagsan u ciyaartay oo ay u qalmaysay guusha balse ay ka liidatay dhinaca dhamaystirka.
“Kubadda cagta waa ciyaar xoog looga baahan yahay. Si fiican ayaanu u ciyaarnay, tamar ayaanu muujinay, laakiin dhamaystir maanaan lahayn. Waxaanu la tagnay sharaf laakiin waanu murugaysanahay sababtoo ah tani waa dhirbaaxo adag oo nagu dhacday. Waa guul-darro nasoo gaadhay, waayo waxay ahayd semi-final, manaanaan awoodin inaanu ciyaarno finalka, mar kale ayaanuse isku dayi doonaa.” Sidaas waxa yidhi tababare Santiago Solari oo hadlayey kaddib ciyaartii xalay.
Solari waxa uu xusay in kooxdiisu fursado badan iska khasaarisay qaybtii hore, waxaanu yidhi: “Fursado ayaanu helnay qaybtii hore, sidoo kale qaybtii dambe markii ay 1-0 ahayd waxaanu helnay fursado. Marna kamaan fikirin in maamulka ciyaarta aanu lumino laakiin waxay dhaliyeen laagoodii ugu horreeyey, kaddibna kii labaad ayaanu iska dhalinay, anaguna maanaan dhashan markii aanu fursadda helnay.”